Ukuthengiswa kwephrinta ye-Flatbed Digital China Manufacturer
Incazelo:I-Flatbed Digital Printer,I-Flatbed Digital Printer Price,Umshini wokunyathelisa we-Flatbed Digital
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > Ukuthengiswa kwephrinta ye-Flatbed Digital
Iphrinta ye-UV Flatbed ithatha uhlelo lokulawula ikhomputha ye-multi-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe (design) zifakiwe kukhompyutha, zingaphrinta kunoma yiluphi ulwazi ngqo.
Ezifana: i-portrait, landscape, i-oli, i-ink, i-calligraphy, imidwebo yemidwebo, njll. I-Printer Digital Flat Printer edayiswa njengehhovisi elivamile le-printer, kulula ukusebenza, ukuma ngokushesha, ngokushesha futhi kulula. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo kanye nokwenza umuntu. Akugcini nje ukukhombisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi, kodwa futhi ubonisa indlela ephelele yokubala kombala, umdwebo we-gradient nemiphumela yombala wokuguquka.
I-Flatbed Digital Printer uhlobo oluthile lokusebenzisa imishini yedijithali ye-"non-contact" ye- inkjet , uhlelo lokusebenza lwe- Flatbed Digital Printing Machine olunzulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
I-Flatbed Digital Printer Price Umehluko:
Izici eziwusizo ze- Flat Bed Printer yethu I-RF-ZZ1 / ZZ2:
I-UV Flatbed Acrylic Printer Xhumana Nanje
I-UV Flatbed Printer Auction Xhumana Nanje
Iphrinta ye-UV ephathekayo e-Chennai Xhumana Nanje
Izindleko eziphansi ze-UV UV Printer Cost Xhumana Nanje
I-Flatbed Digital Printer I-Flatbed Digital Printer Price Umshini wokunyathelisa we-Flatbed Digital I-UV Flatbed Digital Printer I-Dtg Bag Digital Printer I-Digital UV Printer I-Dtg Flatbed T Shirt Printer I-DIY Flatbed UV Printer